Flange mhando Slewing Kubereka Fekitori - China Flange mhando Slewing Kubereka Vagadziri, Vatengesi
6.Flange mhando slewing inobereka mazino mhando
-Ekunze giya slewing kubereka
-Mukati giya slewing kubereka
-Non-giya slewing kubereka
Yakagadzirwa MuChina Slewing Kubereka Slewing Machine Mabheyaringi Slewing Ring Mabheyari
1. Isu tiri mugadziri wekugadzira inobereka kweanopfuura makore gumi.
2. Tine michina yemhando yepamusoro uye yakasimba timu yekudzora mhando.
3. Kubudirira kwekugadzira nekumhanyisa uye ne - nguva yekuendesa sevhisi.
4. Gamuchira zvakajairika uye zvisina kujairika kugadzirwa.
XZWD | Lightweight slewing bearings for kurongedza muchina
Lightweight slewing mabheyaringi inoshandiswa iyo ine basa rakareruka, asi inoda rotary. Zvakadai sehombodo kurongedza muchina. Iyo slewing inobereka yaigona kuita kuti kurongedza muchina muhombe zvakanaka uye zadza muzvinwiwa.